Rosia · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Septambra, 2010
Rosia: Arahaba tratry ny tsingerintaona ry @KremlinRussia! ;)
Politika 22 Septambra 2010
Tamin'ny 14 Septambra 2010, nankalaza ny faha 45 taonan'ny vaninandro nahaterahany ny filoham-pirenena rosiana. Ity no tsingerintaonany fahatelo nankalazaina nandritra ny naha-filoham-pirenena azy. Tamin'ny taona 2010, nitobaka ny firariantsoa sy ny fiarahabana avy amin'izao tontolo izao, ary anjatony amin'izy ireny no tsy avy amin'ny antso an-tariby ihany fa avy amin'ny Twitter ihany koa. Mandalina ny fihetseham-po tao amin'ny Tweet-o-sphere i Yelena Osipova .
Sina: Zo hitokona
Azia Atsinanana 22 Septambra 2010
Ny taona lasa iny no nahitana fihamaroan'ny isn'ireo Sinoa mpiasa mitaky ny zony tamin'ny alalan'ny fitokonana nanerana ny firenena; hetsika tsy ela akory nitakian'ireo mpiasa Sinoa ny zon-dry zareo amin'ny asa tany Rosia no nahatonga resa-be na tao anatiny izany na tany ivelan'ny sisintany.
Rosia: Ny fitantaran'ny olona iray avotra tamin'ilay fahirano tany amin'ny Sekoly tany Beslan
Ady & Fifandirana 08 Septambra 2010
Zazavavy 13 taona hanomboka hiditra kilasy fahasivy indrindra i Agunda Vataeva (LJ user agunya) ny 1 septambra 2004 andro izay nanaovana azy ny reniny ary olona maherin'ny 1,100 hafa ho takalon'aina tany antsekoly #1 tany Antsinanan'ny Ossetia, tanànan'i Beslan. Naharitra nandritra ny telo andro ny nitanana azy ireo. Ny reniny,...
Rosia: Ny zava-niainan'ny mpitoraka bilaogy Isiraeliana tany amin'ny Hopitaly Rosiana
Fahasalamàna 02 Septambra 2010
Betsaka ireo olona miaina ny fiainany ka tsy manam-potoana akory ny hijery ireo zavatra fahita amin'ny andavanandro amin'ny fomba fijery vahiny. Indraindray mila mankany ivelany ianao vao mahalala kokoa ny zavatra nataonao na tsia tany an-tranonao. Fa indraindray kosa, vahiny mitoraka bilaogy mikasika ireo zavatra niainany tany amin'ny hopitaly no...